रुसले पाकिस्तानसँग मिलेर भारतलाई दियो झट्का ! - Himali Patrika
रुसले पाकिस्तानसँग मिलेर भारतलाई दियो झट्का !
हिमाली पत्रिका २३ कार्तिक २०७७, 9:16 am
काठमाडौं। भारतको लगातार विरोधलाई बेवास्ता गर्दै रुसको एक सैन्य दस्ता बिहीबार पाकिस्तान पुगेको छ । रुसी सैन्य दस्ताले पाकिस्तानमा पाकिस्तानी सेनासँग मिलेर संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नेछ ।
पाकिस्तानी र रुसी सेनाको यो संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई द्रज्बा–५ नाम दिइएको छ । समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार पाकिस्तान र रुसबीच यो पाँचौं संयुत्तः सैन्य अभ्यास हो । यो अभ्यास २ हप्तासम्म चल्नेछ ।
आतंकवादसँग लड्नको लागि दुई देशको अनुभव साटासाट गर्न यो अभ्यास गर्न लागिएको बताइएको छ । पाकिस्तानी सेनाको मिडिया विंगका अनुसार यो सैन्य अभ्यासमा स्काइडाइभिङ र बन्धकहरुलाई मुक्त गर्ने जस्ता गतिविधिको अभ्यास गरिनेछ ।
पाकिस्तान र रुसको सैन्य अभ्यास हरेक वर्ष गरिन्छ । २०१६ देखि नै पाकिस्तान र रुसको सेनाले यो अभ्यास गर्दै आएका छन् । रुस र पाकिस्तानको सैन्य साझेदारीको भारतले भने बिरोध गर्दै आएको छ ।
भारतले रुससँग पाकिस्तानले आतंकवादलाई संरक्षण गर्ने दावी गर्दै पाकिस्तानसँग सैन्य साझेदारी नगर्न भनिरहेको छ तर रुसले भने भारतको यो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
अहिले पुनः संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि रुसी सेना पाकिस्तान पुग्नुलाई भारतको लागि ठूलो झट्का मानिएको छ । यही वर्ष सेप्टेम्बरमा पनि रुस र पाकिस्तानबीच सैन्य अभ्यास भएको थियो जसका लागि पाकिस्तानी सेना रुस गएको थियो ।
शितयुद्धको समयमा पाकिस्तान रुसविरोधी गुट अर्थात अमेरिकाको साथमा थियो तर विश्वव्यापी परिवर्तनको क्रममा पाकिस्तान रुसको पक्षमा पुगेको छ जसलाई भारतको लागि ठूलो चिन्ताको विषय मानिएको छ । भारत पाकिस्तान र रुसको सैन्य साझेदारी तोड्न प्रयासरत छ तर यी दुई देशबीचको साझेदारी झनै बलियो हुँदै गएको मानिएको छ ।